प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच महत्वपूर्ण ५ समझदारी ! – मुलधार न्युज
Home > राजनीति > प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच महत्वपूर्ण ५ समझदारी !
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार २२:५८
२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका मोदी र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
त्यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीबीच शुक्रबार नै जनकपुरमा भेट भएको थियो । पटनाबाट सिधै जनकपुर आएका मोदीलाई ओलीले जानकी मन्दिरमा स्वागत गरेका थिए ।
जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनपछि काठमाडौं आएका मोदीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसाग शिष्टिचार भेटवार्ता गरे ।
दुई नेताबीच द्वारिकाज होटलमा वान टु वान वार्तापछि द्वीपक्षीय वार्ता पनि भएको छ । लगतै दुई प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोका शिलान्यास गर्नुका साथै सम्बोधन गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच कुनै सम्झौता भएन ।
नेपाल ल्याण्डलक नरहोस्ः भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार नेपाल ल्याण्डलक कन्ट्री नहोस्, ल्याण्डलिंक र वाटर लिंक होस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भिजनलाई साकार गर्न भारतले हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ ।
रक्सौल काठमाडौं रेल्वेको सर्वे छिट्टैः मोदीका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ । केही काम भइसकेका छ भने केही छिट्टै हुनेछ । उनका अनुसार रक्सौल काठमाडौं रेल्वेको सर्वे छिट्टै हुनेछ । अघिल्लो महिना भएको ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रेल्वे निर्माण सहमति भएको थियो ।
स्वास्थ्यमा सहयोगः भारतले क्यान्सरको उपचारमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । मोदीका अनुसार भारतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भावा ट्रोमा रेडियो थेरापी मेसिन छिट्टै जडान गर्नेछ ।
पञ्चेश्वरको डीपीआर छिट्टैः दुई देशका प्रधानमन्त्रीका अनुसार भेटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर छिट्टै बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि दुई देशको टिम छलफलमा बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
ओलीसँग मिलेर आफूले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेको भन्दै मोदीले उर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय जोडिएको बताए । उर्जाका अरु सहयोग परियोजनामा पनि कुराकानी भइरहेको उनले बताए ।
कृषि सहयोग रोडम्यापः दुई प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाल र भारतका कृषि मन्त्रीको बैठक छिट्टै बस्नेछ । यो बैठकले कृषि सहयोग अनुसन्धान, शिक्षामा सहयोगको रोडम्याप बनाउनेछ । साथै ब्यापार सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउन ‘टि्रटी अफ ट्रेड’लाई पुनरावलोकन गर्न पनि दुई देश सहमत भएका छन् ।
पूजा बोहोरामाथि बलात्कार गर्नेलाई साढे ११ वर्ष जेल सजाय
चेक कीर्ते गरी बैंकबाट बढी रकम निकालेको आरोपमा प्रहरी जवान निलम्बित
प्रहरी संगठनका किराहरु फाल्ने क्रम सुरु भइसक्योःआईजीपी सर्बेन्द्र खनाल
पत्रकार पुडासैनी हत्या प्रकरणः रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ
सेनाको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ४५३ जना लाभान्वित
चितवन राइनोजलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै पोखरा पल्टन च्याम्पियन